Siduu ku billowday muranka xuduud-badeedka? (Sooyaal) | KEYDMEDIA ONLINE
Siduu ku billowday muranka xuduud-badeedka? (Sooyaal)
Kadib sanado badan oo qeyb ka mid ah badda Soomaaliya ee kheyraadku ceegaago, ay ku jirtay muran xudooddeed, lagana hor taagnaa damaca waalan ee Kenya, ugu danbeyn, maamta ayaa la filayaa in loo dabbaal-dego guusha uu dadaalkeedu qaan-gaaray ee qaanku ka gaaray kiiska badda.
MUQDISHO, Soomaaliya – Guud ahaan bulshada Soomaalida ayaa isku diyaarineysa, u dabbaal-degga guusha uu dalku ka gaaray dhiggiisa Kenya, ee ku aaddan, in Maxakamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda ay muranka ka saartay badda Soomaaliya ee Kenya damacday in ay boobto 15 sano ka hor.
Rajada ayaa gaartay halk ugu sarreysa, kadib markii Dowladda Kenya ay ku dhawaaqday in aysan aqoonsan doonin go’aanka la filayo inuu maanta ka soo baxo, (ICJ), waxaana la rumeysan yahay in horraanba badda Soomaaliya laga saaray muranka.
Hadaba, Siduu ku billowday muranka xuduud-badeedka?
Soomaaliya xilligaas waxay ku jirtay marxalad adag, oo dowlad la’aan ah, waxayna dhex-dabaalanaysay duruufo amni, abaaro, barakac iyo dagaal sababay in dad badan dalka ka cararaan.
Sannadkii 2005 Kenya ayaa wafdi u dirtay Baydhabo oo xiligaa xarun u ahayd dawladii KMG ahayd ee uu Madaxweynaha ka ahaa AUN Cabdullaahi Yuusuf, si ay uga dhaadhiciyaan in xudduud-badeedka labada dal wax laga baddalo, balse isku-daygaasi ayaa fashilmay kadib markii laga diiday.
Muranka Kenya iyo Soomaaliya ee xadka badda waxuu haatan socdaa 12 sano iyo lix bilood, marka laga xisaabiyo xilligii la saxiixay MoU, halka Todobo sano ay ka soo wareegtay xilligii maxkamadda Caalamiga ee Cadaaladda [ICJ] loo gudbiyay dacwada.
Dhageysigii ugu danbeeyay ee kiiska badda oo dhowr jeer dib u dhacyo ku yimaadeen, ayaa dhacay 18 March 2021, dowaladda Kenya ayaana xilligaas iska diiday inay ka qeybgasho dhageysiga, iyadoo sheegtay inay cadaalad darro ka tabaneyso Maxakamadda, oo diidday codsigeedi ahaa in mar 4aad dib loogu dhigo dhageysiga kiiska.
Ugu danbeyn Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda (ICJ), oo ah hay'adda ugu weyn ee garsoorka ee Qaramada Midoobay, isla-markaana kiiskaan gacanta ku heysay tan iyo 2014-kii, ayaa la filayaan in ay maanta oo ku beegan 12ka Oktoobar 2021, ay ku dhawaaqdo go’aanka kama danbeysta ah ee muranka badda.